Baarlamaanka Maamulka Jubbaland ayaa maanta waqti kordhin u sameeyay xilliga uu Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ku soo magacaabayo Golaha Wasiirada – STAR FM SOMALIA
Baarlamaanka Maamulka Jubbaland ayaa maanta waqti kordhin u sameeyay xilliga uu Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ku soo magacaabayo Golaha Wasiirada, kadib markii ay dhamaatay waqtigii laga doonayay inuu ku soo dhiso Golihiisa Wasiirada.
Kulan Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland maanta ku yeesheen xarunta Ceymiska ee magaalada Kismaayo waxaa waxaa 59 Xildhibaan oo ka qeyb gashay 54 ka mid ah ay u codeeyeen in muddo labo bilood oo dheeri loogu daro Madaxweynaha, si uu u soo dhiso Gole Wasiiro.
Guddoomiye kuxigeenka saddexaad ee Baarlamaanka Jubbaland Aadan Khaliif ayaa ku dhawaaqay natiijada codka, isagoo sheegay in Xildhibaanada ay isku raaceen in muddo labo bilood loogu daro Madaxweynaha.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo bartamihii bishii Agosto loo doortay xilka Madaxweynaha, kadib doorasho muran dhaliyay ayaa waxaa uu ku sababeeyay muddo kordhintiisa in dib u heshiisiin uu ka wado deegaanada maamulkiisa iyo wada tashiyo uu la leeyahay qeybaha bulshada.
Waa markii labaad oo Madaxweynaha Jubbaland waqti kordhin loo sameeyo, si uu u soo magacaabo Gole Wasiir, waxaana aad la isu weydiinayay muddo saddex bilood oo heystay sababta uu Golihiisa Wasiirada u soo magacaabi la’yahay.